Ukuhlonishwa kwezindlu – iAfrika
Emakhasini adlule sike sabhunga ngayo indaba yenhlonipho kulengosi yolwazi lwesintu. Kulelikhasi ke sidlulela endabeni yokuhlonipha indlu noma izindlu ezithile egcekeni ngokubaluleka kwazo. Izindlu ke zihlonishwa ngokubaluleka kwazo kanye nezigaba zazo okuhambisana nenhlonipho ezinikwa yona.
Indlu ebaluleke kakhulu ekhaya ile kanina womnumnzane, nayo ekayise ibalulekile kodwa ke umehluko uba la ekutheni indodana uma isiphuma umuzi wayo noma ibekwa elayo inxiwa uyise usala enxiweni elidala kepha unina wayo uphuma nayo. Ngisho eseshonile unina wayo kodwa ke uyakhelwa indlu yakhe ukuba ibe isetshenziswe njengexhiba lokuphekela uma esadlula emhlabeni. Njengoba sibhunga yona indaba yenhlonipho nje la, akumiwa nhlobo emnyango kanti ke nakhona endlini akumiwa khona, ngoba lokhu kukhombisa ukungahloniphi abadala, nakho ukuhlala emnyango akwenziwa. Abadala babesho ukuthi uma uhlala emnyango uzomilwa ithumba. Endlini ke alishawa nekhwela ngoba abashaya ikhwela amadlozi amakhulu abaziwa ngabalozi, bona ke izanusi ezibuye zibhule ngabo.
Emnyango ufika ekhothameni lwendlu uma uthatha inyathelo elilodwa usuka lapho ufika emlindaziko noma esikhonkwaneni, isikhonkwane lesi sokubethelwa komuzi sihlonywe kulendawo nakhona akuhlalwa khona. Phakathi nendlu kukhona iziko lokubasela khona, kanti ke naseziko akulingwe kuhlalwe khona, emva kweziko kuba umsamo, nakhona akuhlalwa khona kepha kuyaguqwa uma kushiswa impepho. Emsamo kubekwa nakhona incekwa uma kuhlatshwe inkomo, isicathulo noma udengezi lwempepho kanti ke kuphinde kuhlale nokudla kwabaphansi kuphela. Nazo izinhlangothi zendlu imbala zinemibandela yakhona, ngasohlangothini lwesokudla uma ungena endlini kuhlala abesilisa kanti ke kwesokunene kuhlala abasemame. Kanti ke ngisho nomuntu osuke evakashile noma isihambi, sihlala ngenhla endlini uma sivakashile, asihlali ngasemnyango wendlu.